Times24 Nepal » आहा !! गोलभेडा र माग्ने बुढा हेर्नुहोस // भिडियो
आहा !! गोलभेडा र माग्ने बुढा हेर्नुहोस // भिडियो
बजारमा (मार्केटमा) गाेलभेडाकाे मुल्य बढेकाे छ। तरकारीको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको आपूर्ति विभागकाको अनुगमनले जनाएकाे छ । विभागले गरेको अनुगमनमा सबैभन्दा बढी मूल्य आकासिने तरकारीमा गोलभेडा परेको छ। जसको मुल्य दोब्बर बढेको छ।
यसै बिच केदार घिमिरे (माग्ने बूढो)ले पनि तरकारीको मूल्य बृद्वि अच्मित हुदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन गोलभेंडाको भाऊ सोध्दै थिएँ, यसो बिचार गरेको गोलभेंडा त भाऊ घटेको बेलामा खाउंलानी” भनेर ४ आना जग्गा किनेर फर्कें ।अब त्यो जग्गामा गोलभेंडा रोप्ने हो।
यस वर्ष महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने संकेत देखिएको छ। सामान्यतया बजेट भाषणपछि महँगी बढ्ने गर्थ्यो। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ।
तर, यसपटक बजेटअघि नै बजार भाउ अकासिन थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। यसकारण बजेटपछि मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ। तर, त्यसअघि नै महँगी बढ्दा उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन।
महँगीको सबैभन्दा धेरै असर हरियो तरकारीमा परेको छ। तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस वर्ष निरन्तर पानी परेका कारण तरकारी उब्जनी घटेका छ। ‘यसपटक असिना पानी परिरहँदा किसानले बर्से तरकारी राम्ररी लाउन पाएनन। त्यसकारण अहिले उपत्यकामा आपूर्ति घटेको छ उनले भने भारतबाट आयात हुने तरकारी पनि मूल्य बढेर आएको छ ।